kubudikidza Darin Carter | Jun 13, 2018 | Blog | 0 mashoko
The Pos (Point kuti Sale) System ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha chikamu chitoro uye resitorendi mabhizimisi, mazuva ano. Kuva kwako customized Pos maitiro pamusoro mari mazita kunokubatsira ose uchida okutengesa nemishumo. saka, zvikuru nokuti keshiya uyewo nokuda maakaundendi. Izvi Pos Software kunokubatsira kuongorora zvose zvakadai chinhu vakatengesa, inopa uye kushambadza pamusoro chero zvinhu, nguva pakutengeswa kwazvo uye zita keshiya zvakare. Inopa zvakarurama uye nokudaro hamuna mikana zvikanganiso. Unogona kuwana kusununguka Pos hurongwa kubva Harbortouch nokuda retails, Salons, mumaresitorendi namazariro uyewo kana madiki.
Chii Harbortouch Hunopa?
Harbortouch kunokupa yakakwana Pos hurongwa mhinduro. Hunosanganisira Pos Hardware, Pos Software uyewo Integrated mushambadzi mabasa ayo akakwana kuti chero madiki, Retail zvitoro, Salons uye mumaresitorendi kana café. Haufaniri maawa ari kuongorora pamusoro zvaunofanira kwenyu bhizimisi. Harbortouch akakubvunza mimwe mibvunzo inokosha uye unofanira kupindura kuti. ndokubva, vachaziva kuti mhando ezvinhu yawakashandisa vanoda kuti bhizimisi rako kana chitoro. Ane usingashandi mari unogona kuwana basa guru kwavari.
Harbortouch anotipa vakaparadzana Pos enyika yako yakasiyana mabhizimisi zvinodiwa. Unogona kusarudza zvakanaka kwakavakirwa hworudzii bhizimusi une. Imwe neimwe Pos hurongwa ane zvakasiyana zvinhu kufukidza zvavanoda siyana uye zvinodiwa kuti zvikuru mabhizimisi. saka, tinya and Started kuti Free 'Ipfungwa uye kupindura mimwe mibvunzo vanobvunza. Pano vachava kwauri pamusoro mhando bhizimisi zvaunazvo zvakadai nguvo kana shangu, hotera kana resitorendi, Salon kana ndibhadhare mari muchitoro nezvimwewo. Wangopedza kupindura mibvunzo yose, vachava dzinoendesa akasununguka setup chikumbiro chako.
Zviri zvikuru nyore kuwana rusununguko Pos maitiro enyu chitoro zvitoro uye mumaresitorendi kubva Harbortouch. Unofanira kutevera vamwe nyore uye nyore matanho kundoitora. ava:
Contact Harbortouch: Unofanira kutanga kutaura Harbortouch nokuda kuwana Pos hurongwa mahara. For kuti, unofanira kushandisa kuti vakasununguka pfungwa waakazvitengesa pa. Get Chokutenderwa: Kamwe iwe vakashandisa nokuda vakasununguka pfungwa waakazvitengesa hurongwa, unofanira kumirira avo atifarire. Kana ukaenda kubvumirwa kuti vakasununguka Software uye Hardware, imi makanaka kuenda. Unongofanira kubhadhara pamwedzi muripo anofukidza rutsigiro uye services.Free Installation: Uchawana vakasununguka kugadzwa kubva Harbortouch musi Elite dzavo vaipupurirwa wevanamakanika. All wevanamakanika ivo vari zvakanaka vakadzidziswa uye vaipupurirwa. Nokudaro, muchawana guru uye musono basa.
Pamwe kuti nemiwo kuwana muupenyu garandi pamusoro Hardware. Hapana zvimwe upfront mari. Uchawana akasununguka onsite kugadzwa, vakasununguka Muterere zvirongwa uyewo vakasununguka bepa rinopiwa. Kamwe iwe nayo iiswe, uchawana rutsigiro zvakanakisisa kubva tsvimbo dzavo.
Sei Kuti Sarudza This?
Kusarudza vakasununguka pfungwa waakazvitengesa ezvinhu nokuda Harbortouch achakubatsira munzira dzakawanda. Haufaniri maawa kutsvakurudzwa kuti zvakanaka mabasa ichipa Pos Software uye Hardware. Harbortouch anokupa zvakanaka muchikoro Point kuti Sale marongedzero yenyu chitoro zvitoro, mumaresitorendi, Salon uye spas, madiki uye cafés. Ndicho zvikuru dzichikunetsa isina basa kuti unogona nokusingaperi kuwana. Unongofanira kushandisa kuti chirongwa paIndaneti. Uchabva kugamuchira Pos midziyo pamwe vakasununguka chokugadza hapana upfront mutengo. Kunyange mwedzi basa uye rutsigiro kubhadhara kuti uchava kubhadhara iri shoma chaizvo. Izvi muripo usingashandi Uchafukidzwa zvinokosha zvose mabasa.
Kana uine bhizimisi uye kutsvaka yakanakisisa uye inonyatsobudirira Pos hurongwa, zvino Harbortouch anogona kukupa kuti. Unogona kunyorera kuti vakasununguka Pos ezvinhu zvaipiwa navo. Hunosanganisira software yepachena uye Hardware kunobva renyu. Zvinoitawo kunouya zvinokosha zvose zvinhu zvinodiwa achimhanya bhizimisi rako uye kuongorora rokutengesa dzenyu zvakanaka kuti. saka, ichi anoponesa yakawanda zvako zvinokosha nguva uyewo mari. Harbortouch anogona kutarisira zvose wako Pos maitiro zvinodiwa uye zvaanoda zvakanaka.